August 2019 - Page4of9- Myanmar Fire Services Department
ကချင်ပြည်နယ်၊ ဖားကန့်မြို့နယ်၊ ဆိပ်မူကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝှေခါကျေးရွာ၊ လခူးချောင်ရပ်ကွက်ရှိ ရေမဆေးကျောက်လုပ်ကွက်ဟောင်းနေရာများတွင် မြေပြိုကျမှုသတင်း
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ခရိုင်၊ ကျောင်းကုန်းမြို့နယ်တွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းပြီး လေပြင်းများတိုက်ခတ်သဖြ� ....
admin | Aug 8, 2019 | ထူးခြားဖြစ်စဉ်, ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးသတင်း
(၇.၈.၂၀၁၉)ရက်နေ့၊ (၁၃ ၃၀)အချိန်ခန့်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ခရိုင်၊ ကျောင်းကုန်းမြို့နယ်တွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းပြီး လေပြင်းများတိုက်ခတ်သဖြင့် ကံကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကံကလေးကျေးရွာအနီး၊ ပုသိမ်-မုံရွာကားလမ်းမကြီးဘေး၊ မိုင်တိုင်အမှတ်(၀/၅)နှင့် (၀/၆)ကြား...
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကန့်ဘလူမြို့နယ်၊ ထန်းကုန်းကျေးရွာ၏ အနောက်ဘက် ကင်းတပ်ဆည် လက်ဝဲတူးမြောင်း(အလောင်းဖုရားတူ� ....
(၇.၈.၂၀၁၉)ရက်နေ့၊ (၁၂ ၃၀)အချိန်ခန့်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကန့်ဘလူမြို့နယ်၊ ထန်းကုန်းကျေးရွာ၏ အနောက်ဘက် ကင်းတပ်ဆည် လက်ဝဲတူးမြောင်း (အလောင်းဖုရားတူးမြောင်း)အတွင်း ကိုဖြိုးဝေကျော် (၂၆)နှစ်သည် သူငယ်ချင်းများနှင့် ရေဆင်းချိုးရာမှ ရေနစ်မြှုပ်မှုဖြစ်ပွားကြောင်း (၁၂...
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်တွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသဖြင့်(ဆ)ရပ်ကွက်၊ မေဓာဝီလမ်းမပေါ်ရှိ မြေ� ....
(၇.၈.၂၀၁၉)ရက်နေ့၊ (၁၀ ၃၀)အချိန်ခန့်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်တွင် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းသဖြင့် (ဆ)ရပ်ကွက်၊ မေဓာဝီလမ်းမပေါ်ရှိ ‌မြောက်ဥက္ကလာဆေးရုံကြီးအတွင်းသို့ ရေဝင်ရောက်မှု ဖြစ်ပွားကြောင်း (၁၂ ၀၁)အချိန် သတင်းရရှိသဖြင့်...
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးခရိုင်၊ မဒေါက် မြို့နယ်နှင့် ရွှေကျင်မြို့နယ်များတွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသဖြင့် မြ� ....
(၇.၈.၂၀၁၉)ရက်နေ့၊ (၀၉ ၃၀)အချိန်ခန့်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးခရိုင်၊ မဒေါက်မြို့နယ်နှင့် ရွှေကျင်မြို့နယ်များတွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းပြီး မြစ်ရေများမြင့်တက်လာ၍ လူနေအိမ်များသို့ ရေဝင်ရောက်မှုဖြစ်ပွားကြောင်း (၀၉ ၄၅)အချိန် သတင်းရရှိသဖြင့်...
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်တွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းပြီး လေပြင်းများတိုက်ခတ်သဖြင့် (၆)ရပ်ကွက်၊ ခ� ....
(၇.၈.၂၀၁၉)ရက်နေ့၊ (၀၉ ၂၀)အချိန်ခန့်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်တွင် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းပြီး လေပြင်းများတိုက်ခတ်သဖြင့်(၆)ရပ်ကွက်၊ ချင်းတွင်းလမ်းဘေးရှိ လုံးပတ်(၂)ပေခွဲ၊ အမြင့် (၃၀)ပေခန့်ရှိ ပိတောက်ပင်သည် အမြစ်မခိုင်ဘဲ ချင်းတွင်းလမ်းပေါ်သို့ လဲကျပြီး...
Page4of 9« « Previous...23456...Next »
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရမ်းမြို့နယ်၊ ကမာကလူကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွာသစ်ကျေးရွာ၊ ခရမ်း-ပေါက်ပင်ရွှေလှေလမ်းဘေးတွင် ဆီဆိ� ....
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ လောင်းလုံးမြို့နယ်၊ ပဥ္စသီမော်ကျေးရွာတွင် နေအိမ်မီးလောင်မှုသတင်း
ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့နယ်၊ ကော့တရုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မူးကဝါကျေးရွာတွင် နေအိမ်မီးလောင်မှုသတင်း
Fire at the tea shop "Khit San Thu" in Ahlone township, Yangon region
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံမြို့၊ စက်မှုဇုန်၊ ငုဝါလမ်းရှိ ဝါကြိတ်လုပ်ငန်းနှင့် ဆီစက်လုပ်ငန်းစက်ရုံမီးလောင်မ ....
Copyright © 2020 MSFD. Powered By MISL.